Yugnepal | लघुवित्तको मर्जरमा तिब्रता : कुृनकुन मर्जर भए ? कुनकुन हुँदैछन् ?
बिहिबार २९, साउन २०७७ ०४:२९
लघुवित्तको मर्जरमा तिब्रता : कुृनकुन मर्जर भए ? कुनकुन हुँदैछन् ?
Yugnepal 73 पटक पढिएको
नयाँ लघुवित्त खुल्ने क्रमसँगसँगै लघुवित्तहरु मर्जरमा जाने क्रम पनि तीव्र रुपमा अघि बढिरहेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई विभिन्न सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो । अधिकांश लघुवित्तहरु मर्जरमा जादैछन् । केही प्रक्रियामा छन् भने केही पार्टनरको खोजीमा छन् ।
किसान माइक्रोफाइनान्स, एनआरएन लघुवित्त र दिव्य लघुवित्त मर्जर भई एनआरएन लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । २० करोड ९२ लाख रुपैंया चुक्ता पूँजी भएको एनआरएन लघुवित्त, १० करोड ६६ लाख रुपैंया पूँजी भएको किसान र ७ करोड ७० लाख रुपैंया पूँजी भएको दिव्य लघुवित्त एक आपसमा मर्जरमा गएका हुन् । तीन वटै लघुवित्तले बराबर अनुपातमा मर्जरको स्वीकृति लिएका थिए । नयाँ लघुवित्तको अधिकृत पूँजी १ अर्ब, जारी पूँजी ५२ करोड पुगेको छ । नयाँ संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रकुमार शाह रहेका छन् । यसअघि एनआरएनले रामारोशन लघुवित्त र क्रिएटिभ लघुवित्तलाई मर्ज गरेको थियो । धौलागिरी लघुवित्त र आँधीखोला लघुवित्त पनि मर्जर प्रक्रियामा छन् ।
उन्नति माइक्रोफाइनान्स र सहकार्य माइक्रोफाइनान्सको मर्जर पछि उन्नती सहकार्य लघुवित्तको नामबाट संयुक्त कारोबार भइसकेको छ ।
यस्तै आरम्भ लघुवित्त र चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्थाले एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् । हालै बनेपामा एक औपचारिक कार्यक्रम गर्दै एकीकृत कारोबार सुरु गरिएको हो । उनीहरुले आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तिय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका हुन् । उक्त दुई लघुवित्त बीच २०७६ जेठ २२ गते नै मर्जर सहमति भएको थियो । नयाँ नेपाल लघुवित्त र सारथी लघुवित्त बीच पनि मर्जर सम्झौता भएको छ । स्वरोजगार लघुवित्तले जनकपूर लघुवित्तलाई गाभ्ने भएको छ । यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा सम्झौता भएको छ । दाङको महिला सामुदायिक लघुवित्त र पोखराको जाल्पा लघुवित्तले पनि मर्जर सम्झौता गरेका छन् । मर्जरपछि बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय राखी राष्ट्रिय स्तरको कारोबार गर्ने लघुवित्तको योजना छ । सूर्यादय लघुवित्त र त्रिलोक लघुवित्त मर्जर प्रकृयामा छन् ।
पार्टनरको खोजीमा दर्जनौँ लघुवित्त
स्वस्तिक लघुवित्त, मिथिला लघुवित्त, मिर्मिरे लघुवित्त, स्पर्श लघुवित्त लगायत मर्जरको प्रकृयामा छन् । त्यसैगरी घरेलु लघुवित्त, आशा लघुवित्त लगायतले पनि मर्जरको बाटो खोजेका छन् । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ८९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था संचालनमा छन् । जसमध्ये केही लघुवित्तको मर्जर प्रक्रिया पुरा भइसकेको छ । कालिका लघुवित्त र जनसेवी लघुवित्त मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । वोमी माइक्रोफाइनान्स र नागरिक लघुवित्तको पनि मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु भइसकेको छ । यसबाहेक, दर्जनबढी लघुवित्त मर्जर प्रक्रियामा छन् भने दर्जनौँ लघुवित्त मर्जरमा जानका लागि छलफल गर्दैछन् । बैंकिङ खबरबाट साभार
बिहिबार ०१, साउन २०७७ ०१:२७ मा प्रकाशित
संक्रमणको सन्त्रासमा बैंक वित्त आधा कर्मचारी घरमा, आधा कर्मचारी परिचालन
नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढ्यो, झण्डै दुई अर्बको कारोबार
सुनको मूल्य १ लाख ३ हजार पुग्यो
एक लाख नाघ्यो सुनको मूल्य
सुनको मुल्य प्रतितोलामा झण्डै ७ हजारले बढ्यो
राष्ट्र बैंकद्धारा कोभिड प्रभावित व्यवसाय वर्गीकरण
कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरु भने भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको सरकार
डोटी बस दुर्घटनामा ३ जनाको मृत्यु
कोरोनालाई अवसरका रुपमा लिएर देश विकास गरौँ महामन्त्री कोइराला
प्रेसमाथि अंकुश लगाउने प्रावधानसहित एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सम्बन्धी विधेयक पारित
रामचन्द्र पौडेलका दृष्टिमा कांग्रेस पुनर्जागरणका यी ७ आधार
ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगका प्रणेता श्रीकृष्ण जन्माष्ट
चुरे गाउँपालिका ५ गुणी गाउँमा पहिरोले ८ घर बगायो
नेपाली सेनाले सशस्त्र प्रहरीलाई दियो ६ सय वटा राइफल
राप्रपाबाट ३१ जनाले दिए सामुहिक राजिनामा कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने
सुदूरपश्चिममा थप ९४ जनामा कोरोना पुष्टि
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक खाँडले भने अतिक्रमण लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउन बजेट खै ?'
नेपाली कांग्रेसका नेता डा मिनेन्द्र रिजाल आम नेपालीको आवाज
प्रदेशमा एक हजार सात सय सात जना क्वारेन्टाइनमा
नेकपाका महेश्वर श्रेष्ठसहित एक सय ५३ जना कांग्रेसमा प्रवेश
कोरोना नियन्त्रणमा सरकार असफल कांग्रेस
विप्लव समूहका नेता ओम पुन कारागार चलान
प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढी डुवानमा
नेपालगन्जमा सेना परिचालन निषेधाज्ञा जारी